Qaar ka Mid ah Kooxda Jwxo-shiil, oo Habeenkii Xalay Ahaa Muddo Gaaban ku Wada Hadlay Khadka Internet [Skype] – Rasaasa News
Mar 1, 2011 dambiile, Eritrea, ethiopia peace, Jwxo-shiil, Kooxda Jwxo-shiil, ogaden peace, oo Habeenkii Xalay Ahaa Isku Dayey in ay ku wada hadlaan khadka Internet [Skype]
Minneapolis, Feb 28, 2011 [ras] – Waxaa habeenkii xalay ahaa isku dayey in ay khadka Internetka ku wadhadlaan qaar ka mid ah kooxda Jwxo-shiil, nasiib wanaag waa uu ka go,ay kolkay muddo 40 daqiiqo ah wada hadlayeen. Sida aan ka dhagaysanay khadka Skype, waxay damacsanaayeen in ay wada hadlaan habeenkii Sabtiga ahaa wayse u suuro gali wayday, waayo waxay kala joogeen meelo ay saacadahoodu aad u kala duwan yihiin.
Xubnaha aan khadka kula kullanay, waxaa ka mid ah Xuseen Nuur [bacuuda] oo jooga Doha, Qatar, Maxamuud Nuur[Mr garaabo], oo jooga Minneapolis, Maadeey [Abtidoon] oo jooga Ingriiska, Maxamed Cali Yaasiin [Macalin Diirane] oo jooga xiligan Koonfur Afrika, Maxamed Macalin Miskiin [Seedi], oo ku dhuumanaya Konfur Afrika, Cibado Xirsi Mahad, oo joogta Minneapolis iyo Jwxo-shiil, oo jooga Eritrea, waxaa kale oo khadka ku jiray dhawr ruux oo aanan garanaynin, oo qaarkood loogu yeedhayey Yoosle, Axmed holand, cabdulahi iyo xirsi.
Kooxdan oo 20-kii daqiiqo ee u horeeyey is xag xagasho ku dhamaystay telefoonka, ayaa waxay ahayd ujeedadooda ugu weyn ee Teleconference-gu in ay iswar galiyaan xaalada ka soo koradhay dalka Kenya, ka dib kolkii ay dileen Sheekh Maxamed Dubad Xisri.
Waxay isweydiiyeen waxa ay uga soo qayb galin shirka Ina dhuubo iyo iyo Maxamed Af-Jano [ninka la nool Roda af jano], oo Jooga Australia, Macalin Diirane, ayaa ku jawaabay dadku waa badan yahay, xaalada aynu ka hadlaynana waa mid xasaasi ah, kolkaas ayaa la wada fahmay!. Waxaa kale oo ay sheegeen in la sugayey dhawr xubnood oo Jooga Yurub sida Jarmalka, Ingriiska iyo Denmark, laakiin ma ayna soo xidhiidhin.
Jwxo-shiil, oo aad u xabeebsan ayaa furay hadalka oo yidhi “waan idin sallaamay N/hurayaal, xaalad adag baa lagu jiraa, horena way inoo soo mareen arimo ka darani waanan ka soo gudbnay, adkaysi baana loo baahan yahay.” “Waxaa shaqooyin muhiim ah ku jira iyo hawlo Jabhadeed Diirane oo jooga Koonfur Afrka, isaga ayeynu war bixin ka dhaysanaynaa, Diirane khadku waa xagaaga.”
Macalin Diirane, oo warbixin dhiibayey ayaa Telefoonkiisa Koonfur Afrika wada siiyey dadka teleconferece-ga ku jiray, kaas oo ah 0027710168309. Macalinku wuxuu yidhi koonfur Afrka waa meel khatar ah 300 RAND oo lacagta Koonfur Afrka ah, ayaa ku dili karta, maalin iyo habeen walbana shaqo ayaan ku jiraa, in kasta inta badan aan ka dhuumano Dabaqoodhiga Itobiya. Shirar dhawra baanu qabanay waxaana ka soo qayb galay dadweyne Somali ah oo badan oo buuxiyay kaalinkii ay dadkeenu lahaayeen, dhaqaalana way noo balan qaadeen, dadkaasi waxay u badan yihiin Geesiyaasha halganka Somaliya wada.
Macalin Diirane, waxaa uu yidhi sida aan warbixinta ku helayo Kenya fadhi ma yaalo oo xukuumadii Kenya waxay bilowday in ay dhagaysato Woyyanaha. Dhibaatadan inaga ayaa isku abuuray in kasta oo aan aad ugu farxay murtadka la dilay, waxaanse jeclaa in aan Garrissa lagu dilin, ee lagu dilo Qaxootiyada. Sababta oo ah arimuhu sidan ma noqdeen oo waxaa la moodi lahaa in ay ka dambeeyaan ururka aynu wada shaqayno ee Geesiga ah [waxaan u maleeyey in uu ula jeedo Alshabaab].
Maxamuud Noor, ayaa soo dhex galay oo yidhi “Faysal Daahir Kismayo ma ka soo noday mudane Diirane.” …..Khadkii Skype ayaa waxaa ku furmay tashuush badan, waxaana lumay signalkii khadka….
waxaan ka gaabsanayna in aan soo daabacno magacyada ay wateen qaarka computerka ka hadlayey, ee samaynayey isku xidhka.
Waxaan ku rajo waynahay in aan heli doono kulankooda, kan xiga